Injiil, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Injiilku waa warka wanaagsan ee ku saabsan furashada xagga nimcada Ilaah ee ku saleysan rumaysadka xagga Ciise Masiix. Farriinta ayaa ah in Masiixu u dhintay dembiyadeenna aawadood, in la aasay, oo la sara kiciyey maalintii saddexaad ka dib Qorniinku, ka dibna wuxuu u muuqday xertiisii. Injiilku waa warka wanaagsan ee aan ku gali karno boqortooyada Ilaah iyadoo loo marayo shaqada badbaadada ee Ciise Masiix. (1 Korintos 15,1: 5-5,31; Falimaha Rasuullada 24,46:48; Luukos 3,16: 28,19-20; Yooxanaa 1,14:15; Matayos 8,12: 28,30-31; Mark; Fal;-))
Maxaad ku dhalatay
Waxaa loogu abuuray ujeedo! Ilaah mid walbaa wuxuu u abuuray sabab kasta - oo waxaan ugu faraxsanahay markaan ku noolaano si waafaqsan ujeedada uu ina siiyay. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ay tahay.
Dad badani fikrad kama qabaan waxa noloshu ku saabsan tahay. Way nool yihiin wayna dhintaan, waxay raadsadaan nooc macno leh oo ay la yaabanaadaan haddii noloshoodu ay ujeedo leedahay, meesha ay ka tirsan yihiin, haddii ay runtii macno u leeyihiin qorshaha weyn ee waxyaalaha. Waxaa laga yaabaa inay isu soo uruuriyaan dhalada ugu wanaagsan, ama ku guuleystaan ​​abaalmarinta caanka ah ee dugsiga sare, laakiin dhammaan dhaqso qorshayaasha dhalinyarada iyo riyooyinku waxay u duulaan walwal iyo jahwareer ku saabsan fursadaha lumay, xiriirkii guuldarreystay ama aan la tirin karin "Haddii kaliya" ama "maxaa noqon lahaa".
Dad badani waxay ku nool yihiin nolol faaruq ah, oo aan dhammaystir lahayn oo aan lahayn ujeedo iyo go’an aan lahayn oo ka gudbaya qanaca muddada-gaaban ee lacagta, galmada, awoodda, ixtiraamka, ama caannimada oo macnaheedu yahay waxba, gaar ahaan marka mugdiga dhimashada uu soo dhowaado. Laakiin noloshu way ka badnaan kartaa intaas maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ku deeqayaa waxbadan oo kamid ah midkeenna. Wuxuu ina siiyaa macnaha dhabta ah iyo nolosha macno dhab ah - farxadda ahaanshaha wixii uu noo abuuray.
Qeybta 1: Ninkii lagu abuuray araggiisa Eebbe
Cutubka koowaad ee Kitaabka Quduuska ah wuxuu inoo sheegayaa in Eebbe abuuray nin "araggiisa" (Bilowgii 1:1,27). Ragga iyo dumarka “waxaa lagu abuuray ekaanta Ilaah” (isla aayadda).
Sida iska cad laguma sameynin suuradda Ilaah muuqaal ahaan xagga dhererka ama culeyska ama midabka maqaarka. Ilaah waa ruux, oo ma aha abuur la abuuray, oo waxaa nalooga abuuray shay. Si kastaba ha noqotee, Ilaah binu-aadmiga wuxuu ku abuuray araggiisa, taas oo micnaheedu yahay inuu isagu aasaas ahaan inaga dhigay isaga. Waxaan leenahay isku-kalsooni, waan isgaadhsiin karnaa, qorsheyn karnaa, si hal abuur leh u fikir, naqshadeyn kartaa oo aan u dhisnaa, xallineynaa dhibaatooyinka oo aan awood u lahaan karnaa wanaagga adduunka. Oo waan is jeclaan karnaa.
Waa in nala Abuuro "Ilaah ka dib, xaqnimo iyo quduusnaan run ah" (Efesos 4,24). Laakiin had iyo jeer dadku ma wada jecla Ilaah marka loo eego arrintan. Dhab ahaantii, dadku badanaa waxay noqon karaan kuwa aan cibaado lahayn. In kasta oo aan ilaahnimada ahayn, si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo qaarkood oo aan ku kalsoonaan karno. Marka hore, in Ilaah had iyo goor aamin ku noqon doono jacaylkiisa uu inoo qabo.
Axdiga Cusubi wuxuu naga caawinayaa fahamka waxa ay tahay in lagu abuuray suuradda Ilaah. Rasuul Bawlos wuxuu noo sheegayaa in Eebbe noo beddelo wax kaamil ah oo wanaagsan - Sawirka Ciise Masiix. "Sababtoo ah wuxuu doortay, wuxuu sidoo kale go'aansaday inay la mid noqdaan sawirka wiilkiisa, si uu curad ugu noqdo walaalo badan" (Rooma 8,29). Si kale haddii loo dhigo, Ilaah wuxuu ugu talo galay bilowgii in aan noqono sida wiilka Ilaah ee xagga jidhka ku jira sida Ciise.
Bawlos wuxuu leeyahay in Ciise qudhiisu "waa suuradda Ilaah" (2 Korintos 4,4). «Isagu waa suuraddii Ilaaha aan la arki karin» (Kolosay 1,15). Waa tusaalaha saxda ah ee wixii nalagu abuuray. Waxaan nahay carruurta Ilaah ee qoyskiisa waxaanan eegnaa Ciise, Wiilka Ilaah, si aan u aragno waxa ay taasi ka dhigan tahay.
Mid ka mid ah xertiisii ​​Ciise ayaa weyddiiyey: Aabbaha na tus “ (Yooxanaa 14,8). Ciise wuxuu ugu jawaabay: "Kii i arkaana wuxuu arkaa Aabbaha" (V. 9). Si kale haddii loo dhigo, Ciise wuxuu yidhi: Waxaad runtii u baahan tahay inaad ka ogaatid Ilaah waa lagu arki karaa aniga.
Kama hadlayo midabka maqaarka, qaabka dharka ama xirfadaha nijaariyaha - wuxuu ka hadlayaa ruux, dabeecad iyo ficil. Ilaah waa jacayl, John ayaa qoray (1 Yooxanaa 4,8), iyo Ciise wuxuu ina tusayaa waxa jacaylku yahay iyo sida aan u jeclaan karno sida dadka loo beddelayo muuqaalkiisa.
Maaddaama dadka loo sameeyay muuqaalka Ilaah iyo ciise waa ekaanta Ilaah, layaabna ma leh in Ilaah noo qaabeeyo muuqaalka ciise. Waa inay "qaab" annaga ku dhex jirtaa (Galatiya 4,19). Hadafkeenu waa "inaan gaarno dhammaystirka buuxnaanta Masiixa" (Efesos 4,13). Maaddaama aan dib u dejinno muuqaalkii ciise, muuqaalka Ilaah baa inagu leh oo dib ayaanu u noqonay oo waxaa naloogu abuuray inaan sameeyo.
Laga yaabee inaadan aad ugu egayn ciise hada. Taasi waa caadi. Ilaah hore ayuu u ogaa taas, waana sababtaas tan uu kula shaqeynayo. Haddaad u oggolaatid isaga, wuu kaa beddeli doonaa - kuu beddeli doonaa - si aad ugu noqotid Masiix oo kale (2 Korintos 3,18). Waxay qaadataa dulqaad - laakiin howshu waxay nolosha ka buuxineysaa macno iyo ujeedo.
Waa maxay muxuu Ilaahay dhammaan u wada qaban waa isla markiiba? Sababta oo ah taasi ma tixgelinayso qofka dhabta ah, fekerka iyo qofka jecelba waa inaad ahaataa mid doonistiisa ku jirto. Isbeddelka maskaxda iyo qalbiga, go'aanka ah in loo leexiyo oo lagu aamino Ilaah wuxuu qaadan karaa xoogaa daqiiqad ah, sida go'aanka ah inaad ku socoto wado gaar ah. Laakiin safarka dhabta ah ee lagu maro wadada waxay qaadataa waqti waxayna noqon kartaa caqabado iyo dhibaatooyin. Sidoo kale, waqti ayey qaadataa in la beddelo caadooyinka, dabeecadaha, iyo aragtiyaha qoto dheer.
Ilaah sidoo kale wuu ku jecel yahay oo wuxuu doonayaa in aad isaga jeclaato. Laakiin jacaylku waa jacayl keliya marka si xor ah loo bixiyo, maahan markii loo baahdo. Jacaylka qasabka ah maahan jacayl gabi ahaanba.
Way soo fiicnaataa oo sii fiicnaataa
Ujeeddada Ilaah ee adiga keliya ma aha inaad la mid tahay Ciise 2000 oo sano ka hor - laakiin sidoo kale inuu noqdo siduu isagu haatan yahay - sara kacay, aan dhiman doonin, oo ay ka buuxsantay ammaan iyo xoog! Isagu wuxuu "u beddelayaa jidhkeenna aan waxtarka lahayn, inuu isagu markiiba noqonayo jidhkiisa ammaanta leh xagga xoogga uu awoodo wax walbana ugu gudbi karo" (Filiboy 3,21). Haddii aan Masiixa kula midownay noloshan, "waxaynu noqon doonnaa isaga sidii wakhtiga sarakicidda" (Rooma 6,5). “Waxaannu noqon doonnaa isaga oo kale,” ayuu xaqiijiyey Johannes (1 Yooxanaa 3,2).
Haddii aan nahay carruurta Ilaah, Bawlos wuxuu qoray, markaa waxaan hubin karnaa "inaannu ku sarrayn doonno isaga; (Rooma 8,17). Waxaan heli doonnaa sharaf la mid ah tii Ciise - mayd aan weligood dhimanayn oo aan weligood hallaabin, jidhka oo ah kuwa ruuxa leh. Waxaan ku soo sara kicin doonaa sharaf, xoog baa laynoo soo kicin doonaa (1 Korintos 15,42: 44). "Oo sidii aan u soo qaadannay muuqashada dhulka, waxaynu qaadan doonnaa suuradda jannada, oo waxaynu noqon doonnaa sidii Masiix! (V. 49).
Ma jeclaan lahayd sharaf iyo geeri? Eebbe ayaa kuu abuuray ujeedkan! Waa hadiyad cajiib ah oo uu jeclaan lahaa inuu ku siiyo. Waa mustaqbal xiiso leh oo cajiib ah - oo macna u leh nolosha iyo macnaheeda.
Markaan aragno natiijada dhamaadka, hannaanka aan ku jirno hadda macno badan buu sameeyaa. Dhibaatooyinka, tijaabooyinka iyo xanuunada nolosha, iyo waliba farxadaha, macno badan ayey sameyaan markaan ogaanno waxa noloshu ku saabsan yahay. Haddii aan ognahay waxa aan ku faani karno, silica noloshan ku fududaan ayaa loo adkeysan karaa (Rooma 8,28). Ilaah wuxuu ina siiyay ballamo aad iyo aad u waaweyn oo qaali ah.
Dhibaato ma ka jirtaa halkan?
Laakiin sug daqiiqad, waad u maleyn kartaa. Weligay kuma filnaan doono caynkan oo kale ammaanta iyo xoogga. Waxaan ahay qof caadi ah. Hadday samadu tahay meel hagaagsan, anigu meesha kuma lihi. Noloshayda waa jahwareerisay.
Taasi waa hagaagsan - Ilaah baa og, laakiin ma joojin doono isaga. Isaga ayaa qorshooyin kuu leh, wuxuuna horey u diyaariyey dhibaatooyinka noocaas ah si loo xaliyo. Maxaa yeelay dadka oo dhami way xoqeen; qof walba noloshiisa waa qasan yahay qofna uma qalmo inuu helo sharaf iyo xoog.
Laakiin Eebbe wuu ogyahay sida loo badbaadiyo dadka dembiilayaasha ah - iyadoo aan loo eegin inta jeer ee ay wax dumiyaan, wuxuu yaqaanaa sida loo badbaadiyo.
Qorshaha Eebbe wuxuu ku wajahan yahay ciise masiixi - oo ahaa mid aan dambi lahayn meeshayaga oo ku dhibay dembiyadeenna meesheena. Isagu wuxuu ina matalaa Ilaah hortiisa oo wuxuu na siiyaa hadiyadda nolosha weligeed ah haddii aan rabno inaan ka aqbalno isaga.
Qeybta 2: Hadiyada Eebbe
Bawlos dhamaantiis waan wada guul darreysanay, laakiin Bawlos wuxuu yidhi, laakiin waxaa laygu caddeeyey nimcada Ilaah. Waa goob joog! Uma qalmi karno - Ilaah wuxuu inaga siiyaa nimcadiisa iyo naxariistiisa.
Dadka naftooda ula tacaali kara nolosha ma ahan inay badbaadaan - waa dadka dhibku u baahan yahay in la badbaadiyo. Badbaadiyeyaashu "ma badbaadin" dadka is-dabaalanaya - waxay badbaadin karaan dadka haraadku. Ruux ahaan, dhammaanteen waan oonan nahay. Midkeenna kama soo dhowaado kaamilnimada Masiixa, oo la'aanteedna waxaan u dhinnahay wax iska caadi ah.
Dad badani waxay moodayaan inay tahay inaan "ku filnaano" Ilaah. Aynu dhahno waxaan weydiineynaa qaar: "Maxaa kugu kalifaya inaad jannada geleyso ama inaad nolosha weligeed ah ku dhex geli doonto boqortooyada Ilaah?" Qaar badani waxay ku jawaabi doonaan: «Sababtoo ah waan fiicanahay. Waan sameeyay tan ama taas.
Runtu waxay tahay in kasta oo aan wanaag u qabanay si aan meel ugu helno adduunyo kaamil ah, waligeen ma noqon doonno "kufilan" maxaa yeelay annagu damiir ma lihin. Waan fashilnay, laakiin waxaan xaq ku leennahay hadiyadda Eebbe, wixii Ciise Masiix noo sameeyey.
Maaha shaqooyin wanaagsan
Ilaah waa na badbaadiyey, Kitaabka Quduuska ah "ma ahan sida ay shaqooyinkeennu yihiin, laakiin waa sida ay tahay talo iyo nimco" (2 Timoteyos 1,9). Isagu inaguma canaanan shuqulkii caddaaladda ee aan qabanay, laakiinse naxariistiisa aawadeed (Tiitos 3,5).
Xitaa haddii shaqooyinkeennu aad u wanaagsan yihiin, iyagu maahan sababta uu Ilaahay na badbaadiyo. Waa inaan badbaadno maxaa yeelay shaqooyinkeenna wanaagsan kuma filna inay na badbaadiyaan. Waxaan u baahan nahay naxariis iyo nimco, oo Ilaah baa taas ku siiya Ciise Masiix.
Hadday noo suurtageli wayday inaan ku noolaano nolosha weligeed ah dhaqan wanaagsan, markaa Ilaah ayaa noo sheegi lahaa sida. Haddii raacitaanka amarradu na siin karaan nolosha weligeed ah, Ilaah sidan ayuu ku samayn lahaa, ayuu yidhi Bawlos.
"Sababtoo ah kaliya haddii uu jiro sharci nolosha keeni kara, caddaaladdu runtii sharciga ma ka imaanaysaa" (Galatiya 3,21). Laakiin sharciga nooma siin karo nolosha weligeed ah - xitaa haddaan sii haysan karno.
"Waayo, haddii xaqnimada sharciga laga dhex helo, Masiix micnela'aan buu u dhintay" (Galatiya 2,21). Haddii dadku shaqeyn karaan badbaadadooda, uma baahnin badbaadiye si na badbaadi. Muhiim uma ahayn Ciise inuu yimaado dhulka ama dhinto oo la soo sara kaco.
Laakiin Ciise wuxuu u yimid dhulka ujeeddadaas awgeed - inuu innaga dhinto. Ciise wuxuu yidhi inuu u yimid inuu naftiisa dad badan furasho u bixiyo (Matayos 20,28). Noloshiisu waxay ahayd lacag madax furasho ah oo lasiiyay si uu inaga xoreeyo oo u furto. Baybalku wuxuu si isdaba joog ah u muujinayaa in "Masiixu innaga u dhintay" iyo inuu u dhintay "dembiyadeenna" (Rooma 5,6: 8-2; 5,14 Korintos 15,3;; Gal
1,4; 2 Tesaloniika 5,10).
Bawlos wuxuu ku yiri Rooma 6,23, "bixinta dembigu waa dhimashada," laakiin hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix ". Waxaan u qalanay geerida, laakiin waxaynu ku badbaadnay nimcada Ciise Masiix. Uma qalminno inaannu Ilaah la noolaano maxaa yeelay annagu qummanaan ma lihin, laakiinse Ilaah wuxuu ina badbaadiyey Wiilkiisa Ciise Masiix.
Baybalku siyaabo badan ayuu uugu sharaxaa badbaadadeenna - mararka qaarkood wuxuu adeegsadaa ereyo maaliyadeed, mararka qaarkoodna ereyo tilmaamaya dhibbaneyaasha, qoyska, ama asxaabta.
Ereyga maaliyadeed wuxuu caddeeyaa inuu bixiyay qiimaha si uu noo xoreeyo. Ciqaabta ayuu qaatay (geerida) waxaan kasbanay nafteena waxaanan bixinay deyntii aan ku laheyn. Wuxuu qaadaa dembigeenna iyo dhimashadeenna wuxuuna ina siiyaa xaqnimadiisa iyo noloshiisa oo uu ku soo noqdo.
Ilaah wuxuu aqbalaa allabari ciise (intaas ka dib oo dhan, waa isagu kii u diray Ciise inuu bixiyo) wuuna aqbalaa xaqnimada Ciise innaga. Sidaas darteed, innaga oo Ilaah ka soo horjeednay hadda saaxiibbadiis baan nahay (Rooma 5,10).
Weliba wuu idinla heshiiyey, idinkoo ah shisheeyayaal, iyo kii cadowtinimo dhexdiinna kaga dhintay xagga dhimashadiisa aawadeed, inuu isagu hortiisa idinka dhigo kuwa quduus ah oo eedla'aanta iyo eedla'aanta » (Kolosay 1,21: 22).
Dhimashada Masiixa awgood waxaynu ka nahay quduus xagga aragtida Ilaah. Kitaabka Eebbe waxaan uga tagnay deyn aad u weyn oo aan u qaadannay deyn aad u weyn - oo aan ku salaysnayn wixii aan qabanay, laakiin aan ku salaynayno wixii Eebbe sameeyey.
Ilaah hadda wuxuu noogu yeedhaa carruurtiisa - isaguna wuu ina qaatay (Efesos 1,5). "Waxaan nahay carruurta Ilaah" (Rooma 8,16). Hadana Bawlos wuxuu sharraxayaa natiijooyinka cajiibka ah ee korsashadeenna: "Laakiin haddaan carruur nahay, innaguna waxaynu nahay kuwa dhaxla, tan kuwo dhaxla Ilaah iyo dhaxla Masiixii Masiix" (V. 17). Badbaadada waxaa lagu tilmaamay dhaxal ahaan. «Wuxuu idinka yeelay wax ku ool ah dhaxalka quduusiinta nuurka ku jirta» (Kolosay 1,12).
Deeqsinimada Ilaah aawadeed, nimcadiisa darteed, waxaan dhaxalsiin doonnaa faanno - waxaan adduunka la wadaagi doonnaa Masiixa. Ama taa beddelkeeda, wuu nala wadaagi doonaa annaga, sababtuna ma aha inaannaan wax qaban, laakiin maxaa yeelay isagu wuu jecel yahay oo wuxuu doonayaa inuu na siiyo.
Rumaysad baan ku helay
Ciise ayaa ina anfacay; isagu uma uusan abaalmarin dembiyadeenna oo keliya, laakiin dembiyada dadka oo dhan (1 Yooxanaa 2,2). Laakiin dad badani weli taas ma fahmin. Laga yaabee in dadkani aysan wali maqlin farriinta badbaadada, ama ay maqleen nooc qalloocan oo aan macno lahayn. Sababta qaar aawadeed, way rumaysan waayeen farriinta.
Waxay la mid tahay siduu Ciise u bixiyay deymaha, wuxuu ku siiyey koonto bangi weyn, laakiinse ma aysan maqal, ama ma rumeeyaan taas ama uma maleynayaan inay wax deyn ah ku leeyihiin. Mise waxay la mid tahay ciise oo tuuraya xaflad weyn oo wuxuu siinayaa tigidh galitaan, walina dadka qaar baa doorta inayan imaan.
Ama iyagu waa addoomo ka shaqeeya wasaqda, markaasaa Ciise soo raacay oo yidhi: "Waxaan iibsaday xorriyaddaada." Dadka qaarkiis ma maqlaan farriintan, qaarna ma aaminsana, qaarna waxay door bidi lahaayeen inay wasakhda sii ahaadaan halkii ay ka ogaan lahaayeen waxa xorriyadda tahay. Laakiin qaar kale waxay maqlaan farriinta, way rumaystaan, waxayna ka baxaan wasaqda si ay u arkaan waxa nolosha cusub ee Masiixu u ekaan doonto.
Farriinta badbaadada waxaa lagu helaa rumaysadka - iyadoo lagu rumaysto Ciise, oo ereygiisa loo qaato, adoo rumaysta injiilka. "Rumayso Rabbi Ciise, adiga iyo reerkaaguba waad badbaadi doontaa" (Falimaha Rasuullada 16,31). Injiilku wuxuu wax ku ool u yahay "kuwa rumeysan oo dhan" (Rooma 1,16). Hadaanan rumeysanahay farriinta, waxbadan nagama tari doonto.
Dabcan, aaminaadku waa uun kaliya rumaynta xaqiiqooyinka qaarkood ee ku saabsan Ciise. Xaqiiqooyinku waxay leeyihiin saameyn muhiim ah annaga - waa inaan ka leexanaa nolosha aan u abuurnay muuqaalkeena isla markaana taa beddelkeeda aan u jeesanno Ilaaha kan sameeyay aragtidiisa.
Waa inaan qirno inaan dembiilayaal nahay, oo aan u qalmin xaq nolosha nolosha weligeed ah, iyo inaannan u qalmin inaan dhaxlo Masiixa. Waa inaan qirno innaan waligeen "kufiicnaan doonin" jannada - waana inaan aaminsanahay in tigidhada uu Ciise ina siinayo runtii ay nagufiican tahay inaan ka qeyb galno xafladda. Waa inaan aaminsanaano dhimashadiisa iyo sarakicistiisa inuu ku filnaaday bixinta deymaheena. Waa inaan aaminno naxariistiisa iyo nimcadiisa oo aan qiranaa inaysan jirin wado kale oo lagu galo.
Aynu dib ugu noqonno macnaha nolosha dooddeenna. Ilaah wuxuu leeyahay wuxuu inoo sameeyay ujeedo, ujeedadaasuna waa inaan noqonno sidii isaga oo kale. Waa inaan la midowno qoyska Ilaahay, walaalo Ciise, oo aan ku helno qayb ka mid ah hantida qoyska! Waa ujeedo layaableh iyo balan qaad cajiib ah.
Laakiin annagu qaybteenna kama qaban. Annagu sidii ugu wanaagsanayd ugama aannu fiicnayn ciise, taas oo ah, annagu kama aannu fiicnayn. Markaa maxaa inoo horseeda inaan aaminsanaano inaan sidoo kale heli doonno qaybta kale ee "ganacsiga" - ammaanta weligeed ah? Jawaabtu waa inaan aaminsanaano Ilaah inuu yahay naxariis iyo nimco sida uu sheeganayo. Isaga ayuu ujeedkan inoogu sameeyey wuuna sameyn doonaa! Bayaan ayaan ku kalsoonaan karnaa, ayuu yidhi Bawlos, "kii kan idinka dhex bilaabay shaqadii wanaagsanaa wuu dhammaystiri doonaa ilaa maalinta Ciise Masiix" (Filiboy 1,6).
Ciise ayaa bixiyay qiimaha oo wuxuu qabtay shaqadiisii, farriintiisuna waa - farriinta Kitaabka Quduuska ah - ayaa ah in badbaadadeenna ay ka timid wixii uu noo sameeyay. Khibrad (iyo sidoo kale Qorniinka) ayaa sheegaya inaanan nafteenna isku hallayn karin. Rajada kaliya ee badbaadada, nolosha, si aan u noqonno waxa Eebbe ina uumay waa aaminaada Masiixa. Waxaan noqon karnaa sida Masiixa maxaa yeelay kan garanaya qaladaadkeena oo dhan iyo khaladaadkeena wuxuu dhahaa wuu sameyn doonaa!
Noloshu waa macno la'aan Masiixa la'aan - waxaan ku jirnaa wasakh. Laakiin Ciise wuxuu noo sheegayaa inuu iibsaday xorriyadeena, wuu na nadiifin karaa, wuxuu na siiyaa tikidhada bilaashka ah ee xafladda iyo xaq u yeelashada dhaqaalaha qoyska. Waan aqbali karnaa dalabkaan ama waan eryi karnaa oo waxaan ku sugnaana wasakhda.
Qeybta 3: Waxaa lagugu casuumay xafladda!
Ciise wuxuu u ekaa nijaar aan qaan gaarin oo ku yaal tuulo aan qiimo lahayn oo qayb yar oo ka mid ah Boqortooyadii Rooma. Laakiin hadda waxaa si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay shakhsiga ugu muhiimsan ee weligiis noolaa. Xitaa kuwa aan gaalada ahayn waxay qireen inuu naftiisa u huray sidii uu ugu adeegi lahaa dadka kale, oo tan ugu wanaagsan ee jacaylka is-dhiibida waxay u gashaa nafta bini aadamka waxayna taabataa muuqaalka Ilaah ee nagu jira.
Wuxuu baray in dadku ay heli karaan nolol dhab ah oo buuxda haddii ay rabaan inay ka tanaasulaan jiritaankooda jiritaanka iyo raacaan nolosha boqortooyada Ilaah.
Ku alla kii naftiisa lumo aniga aawaday waa heli doonaa » (Matayos 10,39).
Ma haysanno wax aan lunno mooyee nolol aan micno lahayn, nolol jahwareer ah, oo Ciise wuxuu na siiyaa qancin, farxad, xiise iyo buuq badan - weligiis iyo weligiis. Wuxuu nagu martiqaadayaa inaan ka quusanno isla weyni iyo walwal, oo waxaan ku helnaa nabad gudaha iyo farax qalbiga.
Ciise wuxuu nagu casuumay inaan ku raacno isaga oo sharaftiisa leh - laakiin safarka sharafta wuxuu u baahan yahay is-hoosaysiin isagoo mudnaanta siinaya dadka kale. Waa inaan ka furno qabashada waxyaabaha noloshan kujira oo aan xoojino xiisaha aan u qabno Ciise. Haddii aan dooneynno nolol cusub, waa inaan diyaar u noqonno inaan sii dayno kii hore.
Waxaa naloo dhigay inaan noqonno sida Ciise oo kale. Laakiin ma tirtirno kaliya halyeey la ixtiraamo. Masiixiyaddu kuma saabsana cibaado diimeed ama xitaa ujeedo diineed. Waxay ku saabsan tahay jacaylka Ilaah u qabo aadanaha, daacadnimadiisa aadamiga, iyo jacaylkiisa iyo daacadnimadiisa oo ka muuqatay muuqaalka aadanaha ee Ciise Masiix.
Ilaah nimcadiisa ayuu ku muujiyey Ciise; wuu ogyahay si kasta oo aan isugu dayno, inaanan waligeen ku fiicnaan karno. Ciise Masiix baa na siiya caawimaad; Wuxuu ku soo diraa Ruuxa Quduuska ah magaca Ciise inuu inagu dhex noolaado, oo uu inaga beddelo xagga bannaanka. Ilaah baa na qaabiya annagoo isaga la mid ah; Annagu iskuma dayno inaan noqonno sida Eebbe oo kale.
Ciise wuxuu na siiyaa farxad weligeed ah. Qof kasta, sida cunug oo ka tirsan qoyska Ilaah, wuxuu leeyahay ujeedo iyo macne - nolol weligeed ah. Waxaa naloo abuuray sharaf weligeed ah, iyo jidka ammaanta ah ee Ciise laftigiisa ayaa ah jidka, runta iyo nolosha (Yooxanaa 14,6).
Ciisena waxay ula jeedeen iskutallaab. Sidoo kale wuxuu naga codsanayaa inaan ku soo biirno qaybtan safarka. Markaas ayuu dhammaantood ku yidhi, Ku alla kii doonaya inuu i soo raaco, diido nafsaddiisa iskutallaabtiisana maalin walba iskutallaabta ha ku qaado oo ha i soo raaco. (Luukos 9,23). Laakiin iskutallaabta ayaa la sara kiciyay oo ammaanta leh.
Qisooyinka qaarkood, Ciise wuxuu badbaadinta is barbar dhigay diyaafad. Masaalka wiilka prodigal, aabihii wuxuu xaflad u sameeyay wiilkiisii ​​tahriibka ahaa, kaasoo aakhirkii guriga yimid. Dibigii yaraa ee la shishlee oo gowrac; aan cunno oo faraxno! Waayo, wiilkaygan wuu dhintay, wuuna soo noolaaday; wuu lumay oo waa laga helay » (Luukos 15,23-24). Ciise wuxuu u sheegay sheekada inuu muujiyo barta in jannada lagu farxo marka qof u soo jeesto xagga Ilaah (V. 7).
Ciise ayaa masaal kale ka hadlay oo ku saabsan qofka (Eebbe matalay) oo isagu "diyaariyey karaamo weyn oo marti sharaf badan leh" (Luukos 14,16). Laakiin si la yaab leh, dad badan ayaa iska indhatiray casuumadan. "Oo waxay bilaabeen inay raalli gelin ka bixiyaan qof walba markiisa" (V. 18). Qaarkood waxay ka walaacsanayeen lacagtooda ama shaqadooda; kuwa kale waxay ku mashquuleen arrimaha qoyska (Aayadaha 18aad). Markaa sayidki baa casuumay dadka masaakiinta ah (V. 21).
Sidaas oo kale ayay la tahay badbaadada. Ciise wuu casuumay qof walba, laakiin dadka qaarkiis waxay aad ugu mashquulsan yihiin waxyaalaha dunida inay ka jawaabaan. Laakiin kuwa "liita", kuwaas oo garta inay jiraan waxyaabo ka muhiimsan lacagta, galmada, awoodda iyo caannimada, ayaa doonaya inay u yimaadaan inay u dabaaldegaan nolosha dhabta ah ee Cashada Rabbiga.
Ciise wuxuu u sheegay sheeko kale oo nin lagu badbaadshay (matalaya Ciise) oo safar galay. "Maxaa yeelay, waa sidii nin waddan kale ka soo baxay; oo wuxuu u yeedhay addoommadiisii, wuuna ku ammaaneeyey maalkiisa; mid wuxuu siiyey shan konton xabbadood oo lacag ah mid, midka kale, midka saddexaad, mid walbana sida ay kartiisu tahay, markaasuu tegey » (Matayos 25,14: 15). Lacagtu waxay astaan ​​u noqon kartaa dhawr waxyaalood oo Masiixu ina siinayo; aynu halkan ka fiirsanno sidii wakiil ka ah farriinta badbaadada.
Muddo dheer ka dib, sayidkii ayaa soo noqday oo wuxuu weyddiistay heshiis. Laba ka mid ah addoommadii waxay muujiyeen inay wax uun ku soo heleen lacagtii sayidkii, oo waa la abaal mariyey: “Markaas sayidkiisii ​​wuxuu ku yidhi: sax, adoo addoonkaaga ah oo hufan oo aamin ah, waxaad ahayd aamin yar, waxaan kaa doonayaa wax badan. dhig; Gal farxadda Eebahaa! (Luukos 15,22).
Ciise wuxuu nagu casuumay inaan wadaagno farxadiisa, inaan wadaagno farxadda daa'imka ah ee Ilaah innaga inoo qabo. Wuxuu noogu yeedhay inaynu noqonno sida isaga oo kale, inaanan dhiman karin, aan kala go'ayn, oo haybad iyo dembi lahayn. Waxaan lahaan doonnaa awood ka sarraysa. Waxaan lahaan doonnaa dardaaran, sirdoon, hal abuur, awood iyo jacayl ka fog wixii aan hadda ognahay.
Tan kaligeen kuma sameyn karno - waa inaan u oggolaanaa Ilaahay inuu nagu sameeyo. Waa inaan aqbalnaa casuumadiisa si aan uga baxno wasaqda iyo xafladiisa curadka ah.
Ma tixgalisay inaad aqbasho martiqaadkiisa? Haddii ay sidaas tahay, waxaa suuragal ah inaadan arkin natiijooyin yaab leh isla markaaba, laakiin noloshaadu waxay xaqiiqdii qaadan doontaa macno cusub iyo ujeedo. Waxaad ogaan doontaa macno, waad fahmi doontaa halkaad aadayso iyo sababta, waxaadna kuhelaysaa xoog cusub, geesinimo iyo nabad.
Ciise wuxuu nagu casuumay xaflad weligeed sii soconaysa. Ma aqbali doontaa casuumada?